Middle School - International School nke Lyon
Ọhụụ anyị, ebumnuche na ụkpụrụ anyị
Ndụ na ISL
Na-arụ ọrụ na ISL
Ịmụ na ISL
Ụlọ akwụkwọ praịmarị
Banyere ISL PTA
Nkeji Nzukọ PTA
Chọgharịa n'ọbá akwụkwọ anyị ↗
8am ka 4pm
Ụdị Nhọrọ Bipute
Usoro ọmụmụ nke ụlọ akwụkwọ Middle School (Akara 6-8) na-enye nyocha nke ọma nke usoro mmụta dị iche iche nke onye ọ bụla ka ọ na-edobe usoro mmụta zuru oke na nke ụmụ akwụkwọ na-adabere na nkà ihe ọmụma International Baccalaureate na profaịlụ onye mmụta IBO, ha abụọ gụnyere na ọhụụ ISL, 'Iwulite Kasị Mma Anyị Onwe'.
Ịmụ na Middle School na-agba ụmụ akwụkwọ ume ịghọta na azịza nke ọtụtụ ajụjụ na-achọkarị echiche dị oke mkpa na nghọta sitere n'akụkụ dị iche iche nke ihe ọmụma; ọ na-azụlite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nkwurịta okwu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eme ka mmekorita na ịrụkọ ọrụ ọnụ; ọ na-akwalite imepụta ihe, ọrụ onwe onye, ​​uche na gburugburu ebe anyị bi na imeghe anya maka ihe dị iche iche na-ekekọrịta na mba, omenala, okpukperechi, ọdịdị wdg.
A na-eme nyocha nke ọganihu ụmụ akwụkwọ (isiokwu-kpọmkwem na 'ụzọ mmụta') megidere usoro njirisi jikọtara na ebumnuche nke usoro ọmụmụ ọ bụla ma na-agwa usoro nkuzi na mmụta n'ime afọ. A na-enye ihe omume ụlọ mgbe niile iji kwado mmụta na ụmụ akwụkwọ
nwee ohere igosi mmezu ha na nyochaa ebumnuche ha n'otu n'otu na nyocha otu na-aga n'ihu na ule ngwụcha nke afọ.
Tinyere inye ihe ọmụmụ isi akwụkwọ (lee n'okpuru), mmemme ndị gafere usoro ọmụmụ na mmụta dabere na oru ngo bụ akụkụ dị mkpa na nke ewu ewu na usoro ọmụmụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Anyị nwere mmemme nka na egwu egwu, nke nkuzi imewe na teknụzụ na mmemme dị iche iche jikọtara ya. Akwụsịghị ọrụ nhazi oge (STEAM, ebumnuche mmepe na-adịgide adịgide na mmasị onwe onye) na-enyekwa aka n'ịzụlite ọchịchọ ịmata ihe, imepụta ihe na imekọ ihe ọnụ. Na PE, ndị ISL Middle schoolers na-enwe mmasị iji mgbatị ahụ ọgbara ọhụrụ nke mpaghara, egwuregwu egwuregwu na ama egwuregwu dị nso yana nke egwuregwu ọtụtụ egwuregwu astro-turf nke anyị.
Iji teknụzụ maka mmụta bụ akụkụ dị mkpa nke mmemme ụlọ akwụkwọ na asụsụ Bekee (ESOL) na nkwado mmụta akọwapụtara (na ọnụ ahịa mgbakwunye) ebe ọ dị mkpa na dabara adaba.
Iji meju usoro mmụta agụmakwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ, mmemme pastoral nke Middle School na-ekpuchi afọ kwesịrị ekwesị nke ọha na eze na nke onwe yana opekata mpe otu njem obibi n'ime afọ na-enye ụmụ akwụkwọ niile sitere na klas 6 ruo 8 ohere inwekwu ohere ịzụlite mmekọrịta ha na mmekọrịta ha, nzikọrịta ozi na nka idozi nsogbu.
Ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ISL bụ ezigbo nkà na usoro ọmụmụ dabeere na ihe ọmụma iji kwadebe ụmụ akwụkwọ maka ọkwa ọzọ nke agụmakwụkwọ ha, mmemme IGCSE na ọkwa 9 na 10.
Ihe Nlereanya Mmemme Middle School ISL
Dịka akọwara n'elu, ụmụ akwụkwọ nọ na Middle School na-amụ Bekee na French dịka asụsụ obodo ma ọ bụ asụsụ mbụ (gụnyere akwụkwọ); French ma ọ bụ Bekee dị ka asụsụ agbakwunyere maka ndị na-abụghị ndị obodo; mgbakọ na mwepụ; sayensị agbakwunyere; akụkọ ihe mere eme; ọdịdị ala; agụmakwụkwọ anụ ahụ na ahụike; nka anya; egwu na imewe na teknụzụ. Agụmakwụkwọ asụsụ ndị ọzọ dị na ego agbakwunyere ma ọ bụrụ na achọrọ zuru oke.
Maka nkọwa ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị Ntuziaka usoro ọmụmụ nke abụọ ISL.
ISL kwadoro nkuzi na mmụta niile na Middle School Ọhụụ, Ụkpụrụ na Ozi na Profaịlụ Ndị Mmụta IBO.
Ụlọ Akwụkwọ Mba of
Dezie mmasị kuki
N'ụlọ akwụkwọ International nke Lyon anyị na-agba mbọ inyere ụmụ akwụkwọ anyị aka imezu ikike nke onwe ha na agụmakwụkwọ site na mmepe nke nnwere onwe, ịhụnanya ogologo ndụ nke mmụta na nghọta nke nghọta na nkwanye ùgwù n'etiti omenala.
Ndị otu ma ọ bụ ndị otu nyere anyị ikike:
Anyị na-enye kuki. Ọ bụrụ na ị chere na ọ dị mma, pịa "Nabata ihe niile". Ị nwekwara ike ịhọrọ ụdị kuki ị chọrọ site na ịpị "Ntọala". Gụọ amụma kuki anyị
Settings Nabata ha niile
Họrọ ụdị kuki ị ga-anabata. A ga-echekwa nhọrọ gị maka otu afọ. Gụọ amụma kuki anyị
Kuki ndị a abụghị nhọrọ. Ha chọrọ ka webụsaịtị ahụ rụọ ọrụ.
Ka anyị wee melite arụmọrụ na nhazi webụsaịtị, dabere na otu esi eji webụsaịtị ahụ.
Kuki ndị a na-ahụ na webụsaịtị anyị na-arụ ọrụ nke ọma ka enwere ike n'oge nleta gị. Ọ bụrụ na ị jụrụ kuki ndị a, ụfọdụ ọrụ ga-apụ na webụsaịtị (dịka ọmụmaatụ maapụ efu, akwụkwọ na ngwa ntụgharị asụsụ agbajiri agbaji).
Site n'ịkekọrịta mmasị na omume gị ka ị na-aga na saịtị anyị, ị na-abawanye ohere ịhụ ọdịnaya na onyinye ahaziri iche.
Save Nabata ha niile